Dharka ragga ugu fiican dhamaadka sanadka | Niman qurux badan
Haddii ay maalmo koobani ka hadhsan yihiin dhamaadka sanadka oo aanad weli garanayn waxa aad xidhato si aad u dabaaldagto dhamaadka sanadka, masiibo ka jirta, waxaad u timid maqaalkii saxda ahaa. Maqaalkan, waxaanu ku tusi doonaa waxa dharka ragga ugu fiican dhamaadka sanadka. Iyadoo la tixgelinayo in labbisku ay ku habboon yihiin wakhti kasta oo sanadka ah, hagahan sidoo kale waa mid faa'iido leh markaad qorsheyneyso inaad cusbooneysiiso dharkaaga.
Haddii aan haysano lacag nagu filan, iyo waqti, ma jiraan wax la mid ah suudhka loo tolay, nin kasta riyadiisa. Marka aad si cad u qeexdo nooca suudhka kugu habboon oo aad si fiican ula socoto qaabkaaga, markaa waxaanu ku tusi doonaa ku habboon ragga, ku habboon in aan u qaybin doono soo saarayaasha, si ay u sahlanaato in la doorto.
Inkasta oo iibsashada internetka ay noqotay wax caadi ah, marka laga hadlayo dharka ragga, sida haddii ay tahay dharka dumarka, arrimuhu si fiican uma dhammaan karaan, gaar ahaan marka jidhkeenu aanu lahayn cabbirada caadiga ah.
Nasiib wanaag, inta badan noocyada suudhadhku waxay leeyihiin hagaha cabbirka, sidaas darteed waxaa lagu talinayaa in la qaado cabbirada guriga oo mar dambe la hubiyo, oo ka mid ah moodooyinka aan ugu jecelnahay, kaas oo ku habboon jidhkeena.
Sidan, waxaan hubin doonaa inaan helno suudhka oo leh cabbirka ku habboon. Intaa waxaa dheer, sida shirkadaha intooda badan ee wax ku iibisa internetka, waxay noo ogolaadaan inaan ku soo celino alaabta waqti go'an gudahooda, haddii aadan haysan waqti badan ama aadan jeclayn inaad tagto dukaamada, iibsashada suudhka internetka waa doorasho cadaalad ah oo sax ah. tixgeli.
Haddii aan ka hadalno noocyada suudadka, suuqa waxaan ku haynaa tiro badan oo ikhtiyaari ah oo aan tixgelineyno. Dhammaan soo-saareyaasha aan hoos ku tusinno waxay ku dhejiyaan dharkayaga noocyo kala duwan oo suudhadh ah, ku habboon oo aan u isticmaali karno dhacdo kasta, ha noqoto dabbaaldegga shakhsi ahaaneed, arooska, barista, dhammaadka sannadka, dhalashada ama si fudud loo tago inuu shaqeeyo maalin kasta.
5 Calaamadaha iyo Xawaaraha
Shirkadda dharka Isbaanishka ee Mango waxaa la aasaasay ujeedo gaar ah: in la abuuro dhar nuxurka dhexe. Mango waxa ay ilaalisay ujeeddadeeda tan iyo markii la aasaasay in ka badan 30 sano ka hor, oo leh qaabab dabiici ah iyo kuwa casriga ah oo lagu daray dhar aad u raaxo leh.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo noocyo kala duwan ah, laga bilaabo fursadaha caadiga ah, dharka caadiga ah ee aan waligood ka bixin qaabka, suudhadhka la hubiyay iyo daabacaadyo noo ogolaanaya inaan ballaarino dharkayaga sida waafaqsan shakhsiyadayada.
Sida uu sheegay soo saaraha Isbaanishka, suudhka Mango ayaa noo ogolaanaya raac xeerka lebbiska oo leh xeerar adiga kuu gaar ah.
Guriga fashion ee raaxada ee Jarmalka Hugo Boss waxaa lagu yaqaanaa noocyo badan oo dharka ragga ah, qalabyada, kabaha, iyo udgoonka. Waxaa la aasaasay 1924-kii sannadihii hore waxaana loo wakiishay inay soo saarto lebiskii Nazi intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka. Ka dib dhimashadii 1948 ee aasaasihii, Hugo Boss, shirkadu waxay diiradda saartay hawsheeda soo saarista dharka ragga.
Hadda, Hugo Boss wuxuu abuuraa khadadka moodada ragga iyo dumarka iyo sidoo kale udgoonka, si kastaba ha ahaatee, isagoo halbeeg u ah qaybta suudadka ragga. Haddii aad raadinayso suudh raaxo leh, tani waa calaamadda aad raadineyso, marka lagu daro, ma kordho qiimaha.
Sannadkii 1967-kii, Ralph Lauren waxa uu isku dayay in uu ka soo horjeesto isbeddellada wakhtigaas. Wax yar ka dib, waxa uu hawshiisa diiradda saaray ururinta xidhiidh ballaadhan oo guul noqday. Tan iyo markaas, shirkaddu way kortay oo ku fidday qaybaha kale ee adduunka moodada si ay u noqoto boqortooyo caan ka ah adduunka oo dhan.
Ralph Lauren waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo si heer sare ah loo jarjaray, ku habboon gacan-gashi-gacan oo si khibrad leh loogu habeeyey muuqaal caato ah, duuban. Suudhadhka Ralph Lauren waa kuwa ugu qaalisan adduunka oo runtii bixiya tayada haddii aan haysano lacag iyo fursad aan ku xidhno marar badan.
Guriga moodada qaaliga ah ee Faransiiska Dior oo la aasaasay 1946-kii wuxuu naqshadeeyaa dhar tayo sare leh iyo udgoon. Inkasta oo calaamaddu ay ugu horreyntii loogu talagalay haweenka, waxay sidoo kale leedahay dharka ragga ee casriga ah ee qaybta dhexdeeda. Ragga Dior qayb la bilaabay 2000-meeyadii.
In kasta oo xaqiiqda ah in kala duwan ee Dior ee ku habboon si gaar ah uma ballaadhana, odhaahdii hore "tayada ka badan tirada" waxay khuseysaa, mar kale, kiiska moodada. Dharka Dior Men wuxuu bixiyaa farshaxan dhaqameed Talyaani ah iyo xarrago casri ah oo ka samaysan dhar kala duwan oo ku habboon munaasabadaha oo dhan.
Calaamadaha iyo Xawaaraha
Marks and Spencer waa tafaariiqle Ingiriis ah oo caan ah oo la asaasay 1984. Waxaa lagu yaqaanaa wax soo saarka dharka, alaabta guriga iyo cuntada, qaybta dharka ragga waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan shirkadda.
Marks iyo Spencer's noocyo badan oo suudadka ah waxay isku daraan farsamoyaqaanno aan fiicneyn oo leh naqshad aan waqti lahayn oo ku habboon aroosyada iyo munaasabadaha rasmiga ah, laakiin sidoo kale waxay ku daraan taabashada xirfad-xirfadeedka xirashada maalinlaha ah.
Suudhadhkoodu guud ahaan waxa ay ka kooban yihiin saddex qaybood iyo jeexyo caato ah oo casri ah, oo laga sameeyay maro dhogor ah oo isku dhafan, sidoo kale waa kuwo aad u jaban.
Guriga fashion ee raaxada ee Talyaanigu Armani, oo la aasaasay 1975, wuxuu gaadhay heer sumcad ku leh adduunka moodada, taas oo ay ugu wacan tahay dharka quruxda badan ee couture-ka ah iyo dharka casriga ah ee u diyaarsan in la xidho ragga iyo dumarka.
Dharka ragga ee Armani waxaa lagu sameeyaa dhar tayo sare leh oo sharaf leh oo leh qaab aan la isku raacsanayn oo ay weheliso xarrago caadi ah.
Noocyada Armani ee suudadka ayaa lagu heli karaa midabyo aan wakhti lahayn, oo caadi ah oo la jarjaray oo la rakibay, waxayna shaki la'aan soo jiidan doontaa dareenka dabayl kasta. Sida aad filan karto, suudadka guriga Armani ma aha kuwo raqiis ah.
Inkasta oo Burberry uu caan ku yahay jaakad qashin-qubka ah ee astaanta u ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale soo saartaa dhar iyo qalab tayo leh oo kala duwan oo kala duwan oo loogu talagalay ragga iyo dumarka labadaba.
Waxaa la aasaasay 1856, shirkaddan raaxada ee Ingiriiska, Burberry waxay bixisaa dawaarka dhaxalka Ingiriisida ee mudane casriga ah oo leh dhadhan duug ah. Waxa ay dhiirigelinteeda ka soo jiidataa maryaha, plaid trim iyo farsamooyinka caadiga ah, iyada oo soo bandhigaysa naqshado casri ah oo dheeraad ah iyo qalab casri ah.
Suituply, shirkad Nederlaan ah, waxay qaadataa aragti kale oo ku saabsan soo saarista dharka ragga iyo qalabyada isdhexgalka tooska ah taas oo u oggolaanaysa inay bixiso dhar Talyaani oo tayo sare leh qiimo macquul ah.
Waxay leedahay noocyo kala duwan oo suudhadh ah oo aan qummanayn kuwaas oo la tartami kara noocyada ugu caansan uguna qaalisan suuqa. Intaa waxaa dheer, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad abuurto suudh kuu gaar ah, laga bilaabo nooca dharka ilaa ballaca suunka.
Ma waxaad ku raadinaysaa suudh ku habboon oo qiimo jaban ah? Waxaad ka heli doontaa Suisupply.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Dharka ragga ugu fiican dhamaadka sanadka